တခါမှမတွေ့ကြုံဖူးသေးတဲ့ Suncream မျိုးကိုချပြလိုက်တဲ့ Supergoop ရဲ့ Unseen Suncream SPF 40! | CosmeticMyanmar
Home » Article » တခါမှမတွေ့ကြုံဖူးသေးတဲ့ Suncream မျိုးကိုချပြလိုက်တဲ့ Supergoop ရဲ့ Unseen Suncream SPF 40!
တခါမှမတွေ့ကြုံဖူးသေးတဲ့ Suncream မျိုးကိုချပြလိုက်တဲ့ Supergoop ရဲ့ Unseen Suncream SPF 40!
ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ Suncream လို့ပြောလိုက်ရင် အဖြူရောင်ခရင်မ်ဖြစ်ပြီး လိမ်းလိုက်တဲ့အခါ ပြာသလိုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်…ပြီးတော့လည်း ကပ်စေးကပ်စေးဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်ရပြန်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ဒီတခေါက်မှာတော့ Unseen Suncreen SPF 40 လေးကို Supergoop ကနေပြီးချပြလိုက်ပါပြီ… ဒီ Suncream လေးဟာ တခြားတံဆိပ်တွေနဲ့မတူဘဲ တမူထူးခြားလှပါတယ်… ပုံမှန်အသုံးပြုနေကျခရင်မ်ဖြူဖြူကြီးမဟုတ်ဘဲ တကယ်ပဲကြည်လင်တဲ့အရေအမျိုးအစားလေးပါ…
လိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း စေးထိုင်းခြင်းမရှိဘဲ တကယ်ကိုပေါ့ပါးလွန်းလှပါတယ်… SPF 40 ပါဝင်တဲ့အပြင် Antioxident ပါပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တကယ်ပဲ WOW! ပေါ့…Oil-free formula နဲ့ဖော်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် လိမ်းပြီးတဲ့အခါ အဆီတဝင်းဝင်း မဖြစ်နေတော့ပါဘူး…ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း သဘာဝအပင်တွေက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်နှာပျက်စီးမှာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့တဲ့အပြင် အသားအရေတိုင်းလိုအပ်နေတဲ့ရေဓါတ်ကိုလည်း ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှတော့ ကြည်လင်တဲ့အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီပေါ့…
ပုံမှန် SkinCare တွေအသုံးပြုပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်…လုံးဝအံ့ဩလောက်ရတဲ့ ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Primer အနေနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ…ဒီ Suncream လေးကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ မျက်ဝန်းတဝိုက်အရမ်းနီးကပ်စွာ လိမ်းခြင်းကိုတော့ရှောင်ရှားသင့်တယ်နော်…အဆင့်ဆင့်သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးစီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်…
Image Source: www.supergoop.com
PERFUME SEED RICH CREAM SHOWER.2016
အသားအရေကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်နုပျိုဝင်းလဲ့စေမယ့် Brightening Youth Glow Primer!